Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » "Seychelles SMART", mahazo mpanaraka dimy hafa avy any La Réunion
Agence fivezivezena dimy hafa avy any La Réunion no voamarina fa mpiasan'ny SMART Seychelles.
Ny programa natombok'i Seychelles Tourism Board (STB) dia natomboka tao La Réunion tamin'ny taona 2017 izay ahitana singa telo.
Ny programa dia mitaky ny mpandray anjara hamita fotoam-pampiofanana feno momba ny Nosy Seychelles, manaraka izay manana fe-potoana iray taona izy ireo hivarotana fonosana fialantsasatra telo an'i Seychelles. Ny fitsidihana fanabeazana manokana any Seychelles no dingana farany ilaina mba hahazoan'izy ireo mari-pahaizana Seychelles voamarina.
Ny cohort voamarina dia vondrona mpanafika faharoa ho an'ny Réunion. Ireo vaovao amin'ny programa dia i Patricia Lebon avy any Lebon Voyages, Celine Defosse avy any Odysee Voyages, Milles Tour izay soloin'i Pauline Vionne, Latifah Badat of Air voyages ary Rodolphe Grondin avy amin'ny fitsangatsanganana Metisses.
Nahazo ny fanamarinana azy ireo tamina lanonana natao tao Tamassa Lounge and Bar - Eden Island Plaza ny sabotsy 1 septambra lasa teo. Ny hetsika karakarain'ny STB dia notarihin'ny mpanatanteraka Senior Marketing Executive an'ny STB monina ao La Réunion, Bernadette Honore, Executive Executive ho an'ny Ranomasimbe Indianina, Daphnee Zahary, Stephanie Ernesta, Mpanolo-tsaina momba ny Reservation ao amin'ny 7 Degree South sy Creole Travel Services Junior Sales & Marketing Mpitantana, Melissa Quatre.
7 degre South sy Creole Travel Services dia samy manana fifanarahana amin'ny Destination Management Companies (DMC) izay miara-miasa amin'ireo Travel agents.
Tao amin'ny lahateniny nandritra ny hetsika, ny Senior Executive Executive an'ny STB, Bernadette Honore, dia nanonona ny fahafaham-pony tamin'ny fananana vondrona iray hafa avy any Reunion hamita ilay programa.
"Izy io dia traikefa tsara ho an'ny agents; fanampiana ny fampiofanana ataon'izy ireo amin'ny maha matihanina amin'ny dia azy ireo izany. Ny fampiofanana ireo matihanina momba ny fitsangatsanganana any La Réunion dia tena zava-dehibe amin'ny STB amin'ny maha fikambanana azy. Zava-dehibe fa rehefa tonga any amin'ny toerana fivarotana ny mpanjifa dia mifandray amin'ireo olona izay efa tonga tany Seychelles izy ireo ary afaka mivarotra fonosana lehibe am-pitokisana, "hoy i Bernadette Honore.
Talohan'ny nahazoany ny mari-pahaizana Seychelles Smart, dia nankany Seychelles ny vondrona mba hanao dia 1-herinandro fanabeazana any amin'ny manodidina ny Nosy lehibe telo. Ity dia ampahany amin'ny programa hanomezana ireo matihanina mpivarotra dia lavitra any Reunion Travel traikefa.
Raha niresaka momba ny zavatra niainany dia niray feo ny mpandray anjara nidera ny STB tamin'ny fandraisana andraikitra toa izany. Nanolotra ny fankasitrahany ny serivisy fitsangatsanganana Creole sy 7degree atsimo izay iarahan'izy ireo akaiky koa izy ireo.
Naneho ny fahafaham-pony momba ny fitsangatsanganana fanabeazana amin'ny fahazoana an'i Seychelles ho vokatra izy ireo. Nanambara izy ireo fa ny traikefa dia hanampy azy ireo hanome toro-hevitra amin'ireo mpanjifany.
Amin'izao fotoana izao dia agents 39 avy ao amin'ny nosy Réunion no nampiofanina tamin'ny alàlan'ny programa Seychelles SMART Certification.
Vondron'olona matihanina fitsangantsanganana Reunion roa hafa izay nahavita ny dingana rehetra tamin'ny programa fanamarinana maranitra Seychelles no laharana ho an'ny Fanabeazana amin'ny taona 2019.
Mastercard sy mpiara-miasa amin'i PATA hanamafisana ny fizahantany